"Raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo."Matio 18:3
"Tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka, mba hitomboanareo amin’izany ho amin’ny famonjena."1 Petera 2:2
Ao amin’ny Baiboly, ny zazakely dia atao filamatra, eo amin’ny sehatra fototra telo:
- Ny fiovam-po: tsy afaka miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra, raha tsy mahafoy ny hambo. Izany no valinteny nomen’i Jesosy ny mpianany. Nikodemosy, izay manam-pahaizana amin’ny fivavahana hebreo, dia tsy maintsy nianatra hoe ny fahalalany, na ao amin’io sehatra io aza, dia tsy afaka ny hanampy azy hahatakatra ny hafatra nolazain’i Kristy. Tsy maintsy “ateraka indray” ny olona, manjary tahaka ny zazakely amin’ny lafiny ara-panahy, mandray ny fiainana mandrakizay ho toy ny fanomezana avy amin’Andriamanitra.
- Ny fitomboana ara-panahy: ny zaza vao teraka dia mila ronono mba hahafahany mitombo, toy izany koa ny mpino dia mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra (1 Petera 2:2). Ny famakiana izany no mampatanjaka ny finoana (Romana 10:17). Ny fanazavan’ny Tenin’Andriamanitra no ahafahan’ny mpino manao safidy tsara (Salamo 119:105). Ary mbola noho io Teny io koa no ahitany ny tena fifaliana (Salamo 119:162).
- Ny fiderana : raha niditra tao an-tempolin’i Jerosalema Jesosy, dia tafintohina ny mpitondra fivavahana nony nandre ny antsoantsom-piderana nataon’ny ankizy madinika, izay nahatanteraka ny faminaniana ao amin’ny Salamo 8:2, na dia tsy fantany aza, manao hoe: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery”. Ireo manam-pahefana dia tsy nahatakatra hoe iza moa Jesosy, ary inona ny voninahitra mendrika Azy, fa Andriamanitra kosa dia nila vavolombelona, ary fitaovana tsy nampoizina no nampiasainy, dia ankizy madinika.
Rehefa eo ny fahateraham-baovao sy ny fitomboana amin’ny finoana, dia manaraka ho azy ny fiderana, izay andrasan’Andriamanitra avy amin’ny zanany tsirairay (Jaona 4:23).